Lecithin (လက်စီသင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Lecithin (လက်စီသင်)
Lecithin (လက်စီသင်) ကဘာလဲ။
လက်စီသင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
လက်ဆီသင် က အာရုံကြောမှ ထုတ်လွှတ်တဲ့ပစ္စည်း acetylcholine သို့ကူးပြောင်း နိုင်ပါတယ်။ လက်ဆီသင်ကို အသည်းရောဂါကုသသော ဆေးဝါးအတွက် အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဆီသင်သည် သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောရောဂါ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဖောက်ပြန်ရောဂါ၊ အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှု နှင့် ဦးခေါင်းဒဏ်ရာကုသရန်အသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်သုတေသနပြုချက်များအရ လက်ဆီသင်က ဤအခြေအနေများကုသရာတွင် ထိရောက်မှု သိပ်မရှိကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။
အခြားသောသုတေသနနှင့်အတူ သက်သေမပြသော်လည်း အသုံးပြုသည့်ရောဂါများကတော့ ကိုလက်စထရောမြင့်မားခြင်း၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ အရေပြားရောင်ရမ်းမှု၊ အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ရန်၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အိပ်မပျော်ခြင်း နှင့်အခြားအခြေအနေများ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဆီသင်ကို အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များတွင် မပါသော အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအစာလမ်းကြောင်းအတိုင်းသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်အထုပ်ပေါ်မှာရှိသမျှလမ်းညွန်ကိုလိုက်နာပါ။ သင်သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မရေမရာဖြစ်တယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
သင့်ရဲ့အခြေအနေ ဆက်ရှိနေသေးရင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာရင် ဒါမှမဟုတ် သင် ရောဂါလက္ခဏာအသစ် တေခံစားလာရလျှင် သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။ သင်အလေးအနက်ပြုစရာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာရှိမယ်ထင်ရင် ချက်ချင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကူအညီရယူပါ။
လက်ဆီသင်ကို အကောင်းဆုံးကထိန်းသိမ်းနည်းကတော့ တိုက်ရိုက်အလင်းနှင့်အစိုဓါတ်ထိတွေ့မှု မရှိပဲ အခန်းအပူချိန်မှာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်, သင့်ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလက်ဆီသင်ကို သိုလှောင်ထားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသော သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ လက်ဆီသင်အခြား အမှတ်တံဆိပ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အထုပ်မှာပါတဲ့ အညွှန်းကိုကြည့်ဖို့နဲ့ သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် သင့်ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာမှာထားရှိပါ။
မညွှန်ကြားထားလျှင် လက်ဆီသင်ကိုအိမ်သာ သို့မဟုတ် ပိုက်ထဲ စွန့်ပစ်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ ဒိတ်ကုန်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် မလိုအပ်သည့်အခါ ဒီထုတ်ကုန်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
လက်စီသင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
လက်ဆီသင်အသုံးမပြုခင် သင်လက်စီသင်နဲ့ တည့်မတည့်ဆိုတာ သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြထားသင့်ပါတယ်။
လက်စီသင် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကိုယ်ဝန်နှင့် နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်အတွင်းလက်ဆီသင်ကို အသုံးပြု ခြင်းရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုံလောက်သောအချက်အလက်မရှိပါ။ လက်ဆီသင်ကို အသုံးမပြုမီ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အန္တရာယ်များကို ချင့်ချိန်နိုင်ရန် သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
လက်စီသင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
သင့်အရေပြား အနီကွက်ထရောင်ရမ်းခြင်း၊ အသက်ရှူခက်ခြင်း၊ သင်၏မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ သို့မဟုတ် လည်ချောင်းတွေ ရောင်ရမ်းခြင်း ကဲ့သို့ ဓါတ်တမတည့်တုံ့ပြန်မှု လက္ခဏာများရှိပါက အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကူအညီကိုရယူပါ။ လက်ဆီသင်ရဲ့ ဆိုးကျိုးအကုန်လုံးကို မသိပေမယ့် လူအများစုအတွက် အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဆေးအဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။
အဖြစ်များတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်တင်းမာခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်း ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို တွေ့ကြုံရတာမဟုတ်ပါ။ အထက်စာရင်းမှာမပါတဲ့ အချို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်မှာ ဒီဆိုးကျိုးတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
လက်စီသင် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
လက်ဆီသင်က သင်လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် သင့်ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းလဲတာ ဒါမှမဟုတ် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေ ရှောင်ရှားရန် သင် သုံးစွဲနေတဲ့ ဆေးစာရင်း (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေး၊ မညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေး တွေနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်ထုတ်ကုန်အပါအဝင်) ကို သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတို့အား ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် သင့်ဆရာဝန်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မည့်သည့်ဆေးကိုမျှ စသောက်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေ မလုပ်သင့်ပါ။
အစားအစာ သို့မဟုတ် အရက်တွေက လက်ဆီသင်နှင့် အပြန်အလှန် ဓါတ်ပြု ပါသလား။
လက်ဆီသင်က အစားအစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့်အပြန်အလှန် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပုံပြောင်းလဲရုံမက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရဲ့ အန္တရာယ်ကို တိုးမြှင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးမသုံးမီ သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် အစားအစာ သို့မဟုတ် အရက် အကျိုးဆက်တွေကိုဆွေးနွေးပေးပါ။
ဘယ်လို ကျန်းမာရေး အခြေအနေက လက်ဆီသင်နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှု ရှိနိုင်သလဲ။
လက်ဆီသင်က သင်၏ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အထူးသဖြင့် အစာစုပ်ယူမှု မကောင်းတာနဲ့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ပိုမိုဆိုးဝါးလာစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ အမြဲသင့်ဆရာဝန်ပါရန် အရေးကြီးပါသည်။
လက်စီသင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ အတွက် လက်ဆီသင်၏ ဆေးပမာဏကဘာလဲ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် နေ့စဉ် ၃-၉ ဂရမ်ကို အကြိမ်ရေ ခွဲသောက်ပါ။
ကလေးတစ်ဦးအတွက် အလက်ဆီသင်၏ ဆေးပမာဏကဘာလဲ။
ကလေးလူနာအတွက် မထောက်ခံထားပါ။ ကလေးအတွက် အန္တရာယ် မကင်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆေးဝါးများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိ အပြည့်အဝ နားလည်သဘောပေါက်ရန် အမြဲအရေးကြီးပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တွေနဲ့တိုင်ပင်ပါ။
လက်စီသင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
လက်ဆီသင်ကို အောက်ပါပုံစံနှင့် အချိုးအစားများအတိုင်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဂျဲဆေးတောင့်ပျော့ ။ ။ ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်။
လက်ဆီသင် ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Lecithin. https://www.drugs.com/mtm/lecithin.html. Accessed June 26, 2016.
Lecithin (Phosphatidyl Choline). http://www.everydayhealth.com/drugs/lecithin-phosphatidyl-choline. Accessed June 26, 2016.
Laparoscopic Cholecystectomy (မှန်ပြောင်းသုံး၍ သည်းခြေအိတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း)